Ch 4 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 4 Mark
4:1 Ary indray, dia nampianatra teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, loatra ka, niakatra an-tsambokely, dia nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary ny vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina.
4:2 Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana, ary hoy izy taminy, in ny fampianarany:
4:3 "Henoy. Indro, ny mpamafy nivoaka mba hamafy.
4:4 Ary raha namafy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, ary ny voro-manidina ka nihinana azy.
4:5 Na izany aza tena, ny sasany dia voafafy tany marivo ambony vatolampy, izay dia tsy manana tany be. Ary nitsangana faingana, satria tsy nisy tany lalina.
4:6 Ary nony niposaka ny masoandro, dia nalazo ireny. Ary satria tsy nanam-paka, dia maty izy.
4:7 Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo. Ary ny tsilo naniry ka nanempotra azy, ary tsy mamoa voa.
4:8 Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara. Ary nitondra voa izay naniry, ary nitombo, ka afaka: ny sasany telo-polo, ny sasany enim-polo, ary ny sasany avy zato heny. "
4:9 Ary hoy izy:, "Izay manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. "
4:10 Ary raha tao amin'ny mangingina, ny roa ambin'ny folo lahy, izay niaraka taminy, nanontany azy momba ny fanoharana.
4:11 Ary hoy Izy taminy:: "Ho anao, efa navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa amin'ireny izay any ivelany, ny zavatra rehetra dia aseho amin'ny fanoharana:
4:12 'amin'izay mba, nahita, mba hahita, fa tsy hahita; ary ny tori, mba handre, fa tsy hahafantatra; fandrao na oviana na oviana izy ireo mba hiova fo, ary ny fahotany dia ho voavela heloka azy ireo. ' "
4:13 Ary hoy Izy taminy:: "Tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Ary noho izany, hataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra?
4:14 Izay mamafy, dia mamafy ny teny.
4:15 Ankehitriny dia misy ireo izay teny an-dalana, izay ny teny dia afafy. Ary rehefa nandre izy izany, Haingana i Satana ka manaisotra ny teny, izay nafafy tao am-pony.
4:16 Ary toy izany koa, dia misy ireo izay nafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy. Ireo, rehefa mandre ny teny, manaiky avy hatrany izany amin'ny hafaliana.
4:17 Nefa tsy manam-paka ao anatiny ireny, ary toy izany koa izy ireo mandritra ny fotoana voafetra. Ary rehefa manaraka ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny teny, tafintohina izy ireo haingana.
4:18 Ary misy ireo hafa izay voafafy teny amin'ny tsilo. Ireo no ireo izay mandre ny teny,
4:19 fa tontolo izao asa, ary ny famitahana ny harena, sy ny faniriany momba ny zavatra hafa miditra, ary suffocate ny teny, ary izany amim-pahombiazana nefa tsy misy voany.
4:20 Ary misy ireo izay nafafy teny amin'ny tany tsara, izay mandre ny teny ka mandray azy; Ary izao mamokatra: ny sasany telo-polo, ny sasany enim-polo, ary ny sasany avy zato heny. "
4:21 Ary hoy Izy taminy:: "Moa ve misy olona miditra amin'ny jiro mba mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana na ambanin'ny farafara? Moa ve tsy ho apetraka eo amin'ny fitoeran-jiro?
4:22 Fa tsy misy takona izay tsy haseho. Sady tsy nisy na inona na inona natao tao amin'ny miafina, afa-tsy ny mba ho bahoaka.
4:23 Raha misy manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. "
4:24 Ary hoy Izy taminy:: "Diniho izay renareo. Amin'ny na inona na inona ohatra no norefesiny avy, dia ho norefesiny miverina atỳ aminao, sy ny maro hafa dia hanampy ho anareo.
4:25 Fa na iza na iza manana, ho azy izany dia homena. Ary na iza na iza no tsy, avy aminy na izay ananany aza dia halaina aminy. "
4:26 Ary hoy izy:: "Ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka izany: dia tahaka ny lehilahy dia ny mamafy voa amin'ny tany.
4:27 Ary izy matory sy mitsangana, andro aman'alina. Ary ny voa germinates ary mitombo, na dia tsy mahalala izany.
4:28 Fa ny tany mitondra vokatra avy hatrany: aloha ny fototra, dia ny sofina, manaraka ny feno voa ny sofina.
4:29 Ary raha ny vokatra dia vokatra, Ary niaraka tamin'izay dia nandefa ny fijinjana, fa efa tonga ny fararano. "
4:30 Ary hoy izy:: "Inona no tokony hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Na ny inona no fanoharana hanoharantsika azy tokony?
4:31 Tahaka ny voan-tsinapy izy, izay, rehefa nafafy tao an-tany, dia kely noho ny voa rehetra izay etỳ an-tany.
4:32 Ary rehefa voafafy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra,, Ary misy rantsany vaventy, betsaka dia avy ny voro-manidina dia afaka ny hiaina eo ambanin'ny alokalony. "
4:33 Ary fanoharana maro toy izany no nanambarany ny teny taminy, koa araka izay hainy hohenoina.
4:34 Nefa tsy niteny taminy Izy raha tsy tamin'ny fanoharana. Na izany aza misaraka, dia nanazava ny zava-drehetra tamin'ny mpianany.
4:35 Ary tamin'izany andro izany, rehefa hariva ny andro tonga, dia hoy izy taminy, "Andeha isika hiampita."
4:36 Ary nandefa ny vahoaka, dia nitondra azy, ka dia tamin'ny sambokely iray, Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy.
4:37 Ary nisy tafio-drivotra mahery nitranga, ary ny onja nipoaka ny sambo, ka ny sambo dia ho feno.
4:38 Ary tao amin'ny vodisambo ny sambo, matory amin'ny ondana. Ary namoha Azy izy ireo ka nanao taminy, "Mpampianatra, no tsy mahakasika anao izao hahafatesanay?"
4:39 Ary nitsangana, dia niteny mafy ny rivotra, Ary nilaza tamin'ny ranomasina: "Silence. Aoka nampangina. "Ary dia nitsahatra ny rivotra. Ary lehibe nitranga filaminana.
4:40 Ary hoy Izy taminy:: "Nahoana no saro-tahotra ianareo? Moa ve ianao mbola tsy manam-pinoana?"Ary izy ireo namely tamin'ny tahotra lehibe. Ary hoy ireo olona hafa, "Iza araka ny hevitrao izany no, fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky Azy?"